Ny fandriam-pahadiovana dia iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra, izay ahafahanao manatsara ny fahasalaman'ny olona iray ary manandratra ny androm-piainany mandritra ny 5-7 taona. Raha manao izany ianao dia ilaina ny mahafantatra ireo karazam-pitondran-tena tsara ary manisy fiheverana ireo soso-kevitra rehetra ho an'ny fampiofanana toy izany mba hitondra tombontsoa fotsiny.
Toro-hevitra sy fanondro-kevitra momba ny fahasalamana mihazakazaka
Ilaina ny mandinika ny zava-misy fa manomboka mihazakazaka maraina, tokony hanatona azy amin'ny saina. Noho izany, ohatra, maro ny olona miezaka mihazakazaka betsaka araka izay azo atao avy amin'ny andro voalohany, fa raha ny marina dia izy no fahadisoana lehibe mety hitondra amin'ny fahasalamana. Ny fikarakarana ara-pahasalamana eo am-piandohan'ny kilasy dia tokony mihoatra ny 15 minitra. Aorian'izay dia afaka mampitombo ny fotoana fandehanana dimy minitra. Misy atleta sasantsasany manoro ny andro voalohany mba handehanana haingana. Izany dia hanampy amin'ny fanomanana ny vatana sy ny hozatra mba hanaovana fampiharana fanampiny.
Misy ny fomba fiasa ara-pahasalamana sasany:
Tena zava-dehibe amin'ny voalohany ny manao fiofanana kely ary manantona ny tongotra, mba hanomanana kely ny hozatra.
Amin'ny jogging, dia tokony hifalifaly ny vatana ambony.
Tokony hivezivezy ny fihetsiketsehana raha tsy mitongilana. Zava-dehibe ny mandanjalanja ary tsy mijery ny tongotrao rehefa mihazakazaka. Ny fomba fijery dia tokony hibaiko ny halavirana eo anoloanao.
Mila mametraka tsara ny tongotrao ianao. Tokony hapetraka eo amin'ny tongotra ny tongotra, ary avy eo dia halalaka mankany amin'ny voditongotra. Fa raha ny tongotrao no manafotra ny tongotrao, Ny fanaovana izany dia mety hanimba vovobony, ka hampitombo indray ny enta-mavesatra aminy.
Ilaina ny handaniana ara-bola ny angovoo. Noho izany, mandritra ny jogging dia zava-dehibe ny tsy manosika ny sandrinao, fa ny hitazona azy ireo amin'ny 90 *. Tsy mila manao fihetsiketsehana hafa ianao ary manandratra ny sorokao avo.
Na dia eo aza ny tombontsoa goavana avy amin'ny fanatanjahan-tena sy ny fitantanana izay tsy voatery ho an'ny rehetra. Noho izany, ny jogging dia mifanohitra amin'ny olona manana fahitana fahitana, ohatra, ny familiana ny retina. Raha eo anatrehan'ny aretina matetika sy ny fitomboan'ny tsindrona intracranial, dia tsy afaka manomboka ny fanatanjahantena raha tsy aorian'ny fisafoana dokotera. Misy aretina mitaiza amin'ny aretim-pisefoana, sy ny aretina miara-miombon'antoka amin'izany, dia manontany tena ny amin'ny tokony ho izy.
Karazana safidy amin'ny tany sy fitafiana
Mba hanatsarana ny fahasalamana Ny toetry ny fahasalamana dia tokony handray an-tanana ny fizotran'ny fampiofanana . Ny tsara indrindra dia ny mifidy loko tsy misy vato sy vato misakana. Aorian'ny fiofanana maharitra sy mahazatra, dia afaka manao jogs eny amin'ny toerana tsy mety ianao. Amin'ity tranga ity dia efa zatra amin'ny fihenjanana tahaka izao ny hozatra ary mety hidina amin'ny kely indrindra ny mety hikitika na hikolokolo.
Ny akanjon'ny fihazakazakazaka dia tsy ny anjara asa kely indrindra. Tokony hifidy zavatra tsara avy amin'ny fitaovana entin-tanana ianao, izay mahasalama tsara koa. Zava-dehibe ny manao akanjo foana amin'ny toetrandro. Fa tokony ho raisina an-tsaina fa mandritra ny fihazakazakan'ny vatana ny hafanana ary raha hafanana loatra izany, dia afaka mahatsapa haingana ianao ary reraka efa hatramin'ny minitra voalohany.
Fanazaran-tena amin'ny fihenan'ny lanjany
Fametrahana tanana eo amin'ny sakana
Ahoana ny fomba famenoana tsara ny gazety?
Fanazaran-tena ho an'ny "pear" ao an-trano
Hevitra ho an'ny fitifirana sary amin'ny natiora
Mandritra ny jacket Down - ireo sary 40 modesty indrindra ho an'ny tsirony rehetra
Sakafo mafana amin'ny trondro
Inona no ilaina ho an'ny sambofiara?
Sakafo miaraka amin'ny chili
Anna Faris sy Chris Pratt dia miara-mitsidika mpitsabo aretin-tsaina iray taorian'ny fanambarana ny fisaraham-panambadiana
Urethritis amin'ny vehivavy
Fanamboarana ny gorodona amin'ny tafo gable
Stucco miora vita amin'ny polyurethane
Ny Tetezan'i Putra
Lady Gaga dia nanolotra sarin'olon-tsy fantatra roa teo am-piandohan'ny hariva